Global Voices teny Malagasy » Mandray ny maripanan’i Hong Kong: Hanao ahoana ny hoavin’ny hetsika ao amin’ny fanoherana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2020 5:02 GMT 1	 · Mpanoratra The Stand News Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika
Herintaona ankehitriny ny hetsi-panoherana fandroahana olona hody any Shina avy ao Hong Kong. Nangonin'ny sehatra media an-tserasera ao Hong Kong antsoina hoe Stand News ny andian-dahatsoatra itarafana ilay hetsika fanoherana. Navokan'ny Global Voices ny endrika nasiam-panovana ireny lahatsoratra araka ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny votoaty ireny. Ny endrika orizinaly shinoa  amin'ny lahatsoratra eto ambany dia nosoratan'i Francis Lee, Profesora ao amin'ny Sekolin'ny Fanoratan-Gazety sy Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Shinoa ao Hong Kong.
Hatramin'ny niparitahan'ny COVID-19 tamin'ny faran'ny janoary, noraran'ny polisin'i Hong Kong izay rehetra famoriam-bahoaka ankalamanjana, amin'ny anaran'ny fitsipika ifehezana ny aretina fantatra amin'ny hoe Fivoriam-Bondrona Voarara .
Fitsapan-kevitra notarihan'ny Foiben'ny Fifandraisana sy Fitopimaso ny Hevi-Bahoaka * [CCPOS] ao amin'ny Oniversite Shinoa ao Hong Kong tamin'ny faramparan'ny volana mey no nampiseho fa 45,8 isanjaton'ny nanontaniana no mahatsapa fa zerô ny fitokisany ny governemanta ary 47,5 isanjato no mahatsapa ao anatiny fa zerô ny fitokisany ny polisy.
Ho fanoherana ilay lalànam-piarovam-pirenena mampiady hevitra  ampiharina ankaterena, mahatratra 41,4 isanjato no maneho zerô fahafaham-po amin'ny fametrahana ny “Firenena Tokana Roa Rafitra”  ao Hong Kong.
Mihoatra ny 60 isanjato amin'ireo nanontaniana no manohitra ny fanapahan-kevitr'i Beijing hamelona ny lalàna vaovao amin'ny fiarovam-pirenena, tsy mandalo amin'ny fanaovan-dalànan'i Hong Kong. Mifanipaka tanteraka amin'ny filazana nataon'i Carrie Lam, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, tamin'ny 16 jona  milaza fa vitsy dia vitsy no manohitra ity lalàna ity io tsikaritra io.
Ity valiny ity dia afa-mitaha amin'ny fitsapan-kevitra natao tamin'ny Novambra 2014, roa volana taorian'ny nanombohana ny hetsika elo pro-demaokrasia .
Ambonin'izany, nisy ny hetsi-panoherana kely tanterahana isambolana ho fahatsiarovana ny trangam-panafihana tao Yuen Long  [mg] (21 Jolay 2019) sy ny fanafihana nitranga tao amin'ny gara Prince Edward  (31 Aogositra 2019) — toe-javatra roa izany manapongatra ny fampiasan-kery tafahoatra nataon'ny polisy tamin'ny mpanao fihetsiketsehana.
Avy eo, tamin'ny 4 jona, an'aliny no nanatevin-daharana hanatontosa fiaretan-tory fandrehetana labozia tao Victoria Park  sy tany amin'ireo distrika ampolony hafa manerana an'i Hong Kong. Tamin'ity taona ity no voalohany nametrahan'ny manampahefana ny fandrehetan-dabozia ho tsy ara-dalàna tamin'ny fanononana ny fanarahamaso ho famerana ny aretina.
Avy eo, ny hetsika goavana tamin'ny jona no nanome lalana ireo fihaonana eny anivon'ny distrika  sy ny fananganana ny Rindrina Lennon  manerana an'i Hong Kong nandritra ny volana Jolay, narahan'ny sit-in milamina tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena an'ny tanàna  sy ny fitsanganan'ny tohivakan'olombelona nanerana ny tanàna tamin'ny Aogositra 2019  [mg].
Rehefa nisokatra indray ny sekoly tamin'ny Septambra 2019, dia nivadika ho toeram-panoherana ny toby an-tsekoly  [mg] sy ireo tsenambarotra mihaja .
Taorian'ny fandresen'ny fiaraha-mientana pro-demaokratika tamin'ny fifidianana anivon'ny distrika tamin'ny volana Novambra, nanomboka nanandrateny ny mpanohana ny hetsika amin'ny hevitra “faribolana ara-toekarena mavo” , izay anaovan'ny vahoaka ankivy ny fiharian'ireo mpanohana ny tandapa, raha mahazo ny fanohanam-bahoaka ny fiharian'ny “mavo”, na mpanohana ny hetsika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/07/21/148563/
 Fivoriam-Bondrona Voarara: https://globalvoices.org/2020/06/02/hongkongers-strive-to-remember-tiananmen-crackdown-despite-ban-on-candlelight-vigil/
 Foiben'ny Fifandraisana sy Fitopimaso ny Hevi-Bahoaka: http://www.com.cuhk.edu.hk/ccpos/b5/
 lalànam-piarovam-pirenena mampiady hevitra: https://globalvoices.org/2020/05/22/one-country-two-systems-on-the-line-as-national-security-law-looms-over-hong-kong/
 “Firenena Tokana Roa Rafitra”: https://en.wikipedia.org/wiki/One_country,_two_systems
 tamin'ny 16 jona: https://www.aljazeera.com/news/2020/06/hk-carrie-lam-security-law-opponents-enemy-people-200616041617904.html
 hetsika elo pro-demaokrasia: https://globalvoices.org/specialcoverage/2015-special-coverage/hong-kongs-umbrella-revolution/
 trangam-panafihana tao Yuen Long: https://globalvoices.org/2019/07/22/armed-mobs-attack-anti-extradition-protesters-in-a-suburban-hong-kong-subway-station/
 fanafihana nitranga tao amin'ny gara Prince Edward: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Prince_Edward_station_attack
 lisitry ny fomba fanoherana.: https://en.wikipedia.org/wiki/Repertoire_of_contention
 fihaonana eny anivon'ny distrika: https://globalvoices.org/2019/07/21/hong-kong-anti-extradition-protests-evolve-into-district-level-demonstrations/
 sit-in milamina tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena an'ny tanàna: https://globalvoices.org/2019/08/14/beijing-says-hong-kong-anti-extradition-protests-show-signs-of-terrorism/
 fitsanganan'ny tohivakan'olombelona nanerana ny tanàna tamin'ny Aogositra 2019: https://mg.globalvoices.org/2019/08/29/142774/
 toby an-tsekoly: https://mg.globalvoices.org/2019/09/13/143035/
 tsenambarotra mihaja: https://globalvoices.org/2019/09/12/glory-to-hong-kong-the-anthem-of-a-protest-movement/
 “faribolana ara-toekarena mavo”: https://globalvoices.org/2019/12/24/in-hong-kong-local-entrepreneurs-champion-the-pro-democracy-cause/